Dental Care – Page5– Healthy Life Journal
သွားကြားထိုးတံသုံးပြီး သွားကြားထိုးဖန်များလျှင် သွားဖုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မြန်မာလူမျိုးအချို့တွင် အစာစားပြီးတိုင်း သွားကြားထိုးတံဖြင့် သွားကြားထိုးကျင့်ရှိရာ ထိုအကျင့်သည် သွားဖုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီး နောင်တွင်သွားကြားထဲ အစာပိုဝင်စေနိုင်ကြောင်း မေးရိုးနှင့်ခံတွင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင်က Healthy Life ဂျာနယ်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ “သွားကြားထိုးတံနဲ့ သွားကြားထဲက အစာတွေကိုထုတ်လို့ရပါတယ်။...
အာဟာရချို့တဲ့မှုကြောင့် ဖြစ်တတ်သည့် သွားနှင့်ခံတွင်း ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် မေးရိုးနှင့်ခံတွင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့ရင် သွားနဲ့ခံတွင်းအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်တတ်ပါသလဲဆရာ။ ဖြေ. ခံတွင်းဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းပဲလေ။ ဒီတော့ အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့တယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ အကုန်လုံးက ချို့တဲ့လာတော့ ခံတွင်းပိုင်းမှာလည်း ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ (၁) ထုံးဓာတ်ချို့တဲ့ရင်...
ကလေးရဲ့ အပေါ်အရှေ့သွား ပြန်ပေါက်တဲ့အချိန် …
မေး. ကလေးတွေရဲ့ အပေါ်အရှေ့သွားက ဘယ်အရွယ်ဆိုရင် ပြန်ပေါက်ပါသလဲရှင်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားပေးပါရှင်။ Nuwar Soe (FB) ဒေါက်တာဟန်ကျော်မိုး (သွားနှင့် ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ကလေးအသက် ခြောက်နှစ်ဆိုရင် ကြီးသွားစပြီး ပေါက်စပြုပါပြီ။ သွားပေါက်တဲ့နေရာနဲ့ သွားပေါက်တဲ့ အချိန်ကို...
မေးရိုးတွင် ဖြစ်တတ်သည့် ရောဂါများ
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် မေးရိုးနှင့်ခံတွင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. မေးရိုးမှာ ဘယ်လိုရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်ပါသလဲဆရာ။ ဖြေ. မေးရိုးမှာဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် သွားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ မေးရိုးရောဂါရှိသလို သွားကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အရိုးကနေဖြစ်လာတဲ့ ရောဂါဆိုပြီးလည်းရှိပါတယ်။ မေး. သွားကြောင့် ဘယ်လိုမေးရိုးရောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါသလဲဆရာ။ ဖြေ....
ဆားနဲ့ သွားတိုက်တဲ့အခါ . . .
မေး. ဆားနဲ့ သွားတိုက်တဲ့အခါ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ကိုခန့်၊ လမ်းမတော်။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင်(မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ဆားနဲ့ သွားတိုက်တာတော့ မကောင်းပါဘူး။ ဆားကကြမ်းတယ်၊ သွားကို တိုက်တော့ပွတ်ရတယ်၊ အဲဒီလိုပွတ်ရင်ဆားရဲ့ ပါဝင်တဲ့ဓာတ်ကြောင့် ကောင်းတာရှိပေမယ့် ဆားရဲ့...
သွားတိုက်ပြီး အိပ်သော်လည်း မနက်နိုးရင် ခံတွင်းနံ့နံနေတယ် . . .
မေး. ညဘက်သွားတိုက်ပြီး အိပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မနက်အိပ်ရာထရင် ခံတွင်းနံ့ နံပါတယ်။ အဲဒီလိုမနံချင်ပါဘူး။ ဘယ်လိုဂရုစိုက်သင့်ပါသလဲဆရာ။ လွင်လွင်သန့်၊ ပုသိမ်။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ခံတွင်းနံ့ နံရတဲ့ အကြောင်းရင်းက သွားဖုံးတွေမကောင်းဘူး၊ သွားမှာ သွားပိုးစားတဲ့အပေါက်တွေ...
သွားတိုက်ဆေးကို အမျိုးမျိုး ပြောင်းသုံးလျှင် . . .
မေး။ ။ သွားတိုက်ဆေးကို ဟိုဟာကောင်းနိုး၊ ဒီဟာကောင်းနိုးနဲ့ အမျိုးမျိုးပြောင်းသုံးဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီလို သွားတိုက်ဆေးကို အမျိုးမျိုး ပြောင်းသုံးတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေကိုသိပါရစေ ဆရာ။ ကိုခန့်၊ လမ်းမတော်။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ။ ။ သွားတိုက်ဆေးက...
အရောင်ရင့်တဲ့ အချိုရည်သောက်ပြီး ချက်ချင်းသွားတိုက်လို့ရပါသလား . . .
မေး. ကျွန်တော်က အရောင်ရင့်တဲ့ အချိုရည်သောက်ပြီးသွားရင် ချက်ချင်းသွားတိုက်ပစ်တတ်ပါတယ်။ တချို့ကလည်း အချိုရည်သောက်ပြီး ချက်ချင်းသွားမတိုက်သင့်ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ သိပါရစေခင်ဗျာ။ ကိုယဉ်ထွေး၊ အင်းစိန်။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အရောင်ရင့်တဲ့ အချိုရည်သောက်ပြီးပြီဆိုရင် စိတ်ကချက်ချင်း...
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် မေးရိုးနှင့်ခံတွင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ကလေးတွေမှာ အချိုတွေ၊ ကစီဓာတ်တွေ စားတာကြောင့်သွားပိုးစားတတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေက နို့ဘူးတွေကိုငုံပြီး တစ်ညလုံးအိပ်တတ်တယ်၊ ထမင်းလုတ်ကြီးတွေငုံပြီး ညအိပ်တယ် . . အဲဒီလို ကလေးတွေက သွားပိုးစားတာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နို့ထဲမှာ သကြားထည့်ဖျော်ပြီးတိုက်ရင် အဲဒီကလေးတွေက...
အံကပ် ကြာကြာခံစေဖို့ . . .
မေး. ကျွန်တော်အံကပ်တပ်ထားရပါတယ်။ အံကပ် ကြာကြာခံအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဦးလှမင်း၊ ပန်းဘဲတန်း။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးမှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အံကပ်ဆိုတာမျိုးက တစ်ချိန်လုံး တပ်မထားသင့်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် အံကပ်တပ်တဲ့အချိန်က တစ်နေ့လုံးမှာ အချိန် ရှစ်နာရီ- ၁၀...